Kabajamtoota dubbistoota keenyaa! “Fayyaan keessan harka keessan jira.”
Akkamitti jechuun kessan hin oolu. Deebii kanaa fi kanneen biroo maxxansa barruu kanaa jildii 9ffaa irratti qabannee dhiyaanna.
Qulqullina Naannoo Jireenyaa Madaalamaa Karaa Mana Fincaanii Arboor Lootiin Itoophiyaatti Beeksisu, Dhaabbata Tajaajila Gargaarsaa Kaatolikii.
Previous Previous post: Akkaataan Ilaalchaa Akkaataa Jireenyaaf Murteessadha!
Next Next post: Milkaa’inni barnoota daa’immanii, qophii dursinee goonuun murtaa’a!